Breaking: मेलम्चीको बाढीले ब’गाउदा एककाे मृ’त्यु भएको पुष्टि, धेरै बे’पता भएको आशका ! - Nepali in Australia
June 16, 2021 autherLeaveaComment on Breaking: मेलम्चीको बाढीले ब’गाउदा एककाे मृ’त्यु भएको पुष्टि, धेरै बे’पता भएको आशका !
मेलम्ची । अबिरल बर्षाका कारण आएको बा’ढीले ब’गाउदा एक महिलाको मृ’त्यु भएको छ । बाढीले ब’गाउदा हेलम्बुका टिकामाया खड्काको म्रु’त्यु भएको हो । धेरै बे’पता भएको आशका गरिएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्र हेलम्बु हुँदै आएकाको बा’ढीले हेलम्बु गाँउपालिकाको तिम्बु र चनौटे बजारमा डु’बानमा परेकोछ। अविरल बर्षाका कारण आएको बाढीले ग्या’ल्थुममा रहेका ट्राउट फर्म, रिसोर्ट बगाएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
मेलम्ची आयोजनामा काम गर्नेहरू बस्ने चाईनिज क्या’म्पमा समेत बा’ढी प’सेको छ । अम्बाथानको सशस्त्र क्याम्प पनि जाे’खिममा राहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलरे जानकारी दिए । तिम्बुदेखि त नदिकिनारमा रहेका धेरै घरहरू बगाएको स्थानिय अर्जुन भण्डारीले बताए ।
अझैसम्म निरन्तर वर्षा भईरहेकोले उद्दार तथा खोजीमा समेत स’मस्या भईरहेको छ ।दर्जनाैं बे’पत्ता भएकाे हुन सक्ने अाँकलनसमेत रहेकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएकाे छ ।हेलम्बुदेखि मेलम्ची मुनीसम्म भागाभाग रहेकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका डिएसपी प्रकाश सापकाेटाले जानकारी दिए ।
हेलम्बुमा रहेकाे प्रहरी कार्यालय भवनसम्म बाढी प’सेकाे छ । सडकहरू ब’गाएकाे स्थानीयले जानकारी दिए ।मेलम्ची अायाेजनाकाे काम गर्नेहरू ब’स्ने चाईनिज क्याम्पमा समेत बा’ढी पसिसकेकाे छ । अम्बाथानकाे सशस्त्र क्याम्प पनि जाे’खिममा रहेकाे डिएसपी सापकाेटाले जानकारी दिए ।
बाढीले अामा ह्याे’ल्माे बसपार्कमा रहेका हाेटल ट’हरा ब’गाएकाे छ ।मेलम्ची नगरपालिकाकाे बहुप्रतिक्षित सि’टी पार्कमा बा’ढी पसिसकेकाे र अाधा भाग बगाएकाे अनुमान रहेकाे स्थानीयले बताए ।थप बिस्तृत विवरण अाउन बाँकी छ ।